Hevitra mikasika an'i Nanie - Tononkira Malagasy - serasera.org
You are here: home > Tononkira
Hevitra mikasika an'i Nanie
Momba an'i Nanie | Hametraka hevitra
2. Nampiditra : rapisoukely
Nanie, mpihira anisan'ny miavaka indrindra amin'ny feony. Tadidiko ilay hiranao vao ianao kely iny, efa garagara kely, fa niova be noho ny tonga lehibe.
Nanie a, tratry ny taona 2005, dia enga anie hitondra fanambinana be dia be ho anao ity taona ity. Ianao no mpihira hankafiziko indrindra fa manana ny tena mahaizy azy ilay feonao garagara kely tsisy mpanana iny. Tohizo hatrany ny hira sy ny fiarahana mamy be, manoroka mamy be.
1. Nampiditra :
Nanie dia tovovavy vao 22 taona. Ny feony somary garagara izay no tena mampiavaka azy. Ary izay feo izay indrindra no hahafahany mihira ireo karazan-kira rehetra tiany hiraina. Vao 9 taona izy, hoy izy, dia efa nihirahira. Kanefa tamin'ny faha-17 taonany no nanitsahany irery, toy ny mpahay hira rehetra, ny sehatra lehibebe, ka tao amin'ny Caf'art no nanolorany amboaran-kira maromaro. Tamin'izay no tena nahafantarana azy.
Efa namoaka raki-kira voalohany i Nanie. Nivoaka tamin'ny volana desambra 2002 teo kosa ny raki-kira faharoa, izay misy ilay hira mitondra ny lohateny hoe "Hir'aina". Anaran-janany io, ary nampitondrainy io anarana io koa ny raki-kira faharoa navoakany. Io hira io no anisan'ireo hira nitana ny loha-laharana nandritry ny herinandro maromaro tao amin'ny Hit-parade RTA.
Nanomboka ny volana oktobra 2002, dia saiky hita amin'ny fampisehoana goavana rehetra i Nanie. Ary izy no azo lazaina fa maro mpankasitraka indrindra amin'ireo vehivavy mpihira amin'izao fotoana izao.
Page rendered in 0.0070 seconds